Eva derin - alaabta Shiinaha Luoxi caaga warshad
Eva play derin
36-skwg Giant Play Mat 9-leben baabuurka Mat Easy Setup ...
Cimlibaadhista xumbo Xal xidhaalaha Mat cimlibaadhista xumbo waaxyihiisu Floor Mats ...
Wood Midho Floor Mat 3/8 inch qaro xumbo Interlockin ...
Wareeriya Jimicsiga Mat la cimlibaadhista xumbo waaxyihiisu dusiyeen
waaxyihiisu dermaha xumbo
CARE ILMO Baby Large Mat Play
Kids kaarbadka Play derin
2 kooxood XPE isticmaalka ilmahaaga wax play derin
Shandong, Shiinaha (Dhul)
Eva xumbo derin
sida ay macaamiisha
bacda OPP, kartoonka
300000 Piece / Cadad per Month
filimada duudduubay kaarka warqadda, ka dibna la soo buuxiyey oo gudaha kartoonka
10-35 maalmood gudahood ka dib markii la helo deebaajiga
Eva xumbo derin:
1,60cm 60cm *, 30 * 30cm, 1.0cm / 1.2cm / 2.0cm / 2.4cm
2, Non-sun ah, barti sare
3, barti wanaagsan, ayaa maray SGS iyo ISO14001, sidoo kale la kulmi UL.
The Character cimlibaadhista Mat:
1, iska caabin Water: Qaabkadhismeedka xumbo Awdida, nuugta, caddayn qoyan aan, iska caabin wanaagsan in biyaha.
2, iska caabin ah daxalka: Si looga hortago daxalka kiimikada, sida biyaha oo kale badda, saliid, acid, alkali iyo wixii la mid ah.
3, Processability: non-wadajir ah, waa ay fududahay in kulul wayn, goynta, daahan oo si dhow ula haboon.
4, Shockproof: Waxay leedahay adkeysiga wanaagsan, qalleyf sare iyo shaqada kayd wanaagsan.
5, Heat ilaalinta: ningax Good, qabow iyo iska caabin hooseeyo heerkulka.
6, ilaalinta Deegaanka: No urta hanti iyo non-wasakhaysan.
Feature ee dermaha ah
1., free, oo aan sun ahayn, si kale ma jiro, wax bilaash ah hogaanka formamide cimlibaadhista deegaanka
2. biyuhu, anti-warqada
3. fudud loo nadiifin, rakibi oo dhaqaaqo
1. Ma waxaad tahay shirkadda manufactory ama ganacsi ah?
A: Waxaan nahay manufactory adeegga OEM / ODM.
2. Ma heli karaa baarka qaar ka mid lacag la'aan ah?
A: Haa. muunad FREE waa la heli karaa, kaliya lacagta xamuulka waxaa bixinaya iibsadaa.
3. Waxaan astaysto karaa waxyaabaha aniga ii gaar ah?
A: Haa, aynu ku faraxsan nahay si ay u helaan codsiyada astaysto aad, midabada, qaababka, aragti, qalbi engegnaantooda aawadeed, daabacaadda hadhuudh, Xarrdhinta 3D, awoodaha iyo hawlaha; Dhanka kale MOQ waa in la tixgeliyaa.
4. Waa maxay nooca hab-bixinta in aad bixisaan?
5. Sidee ku saabsan caadooyinka dejinta lacagta?
A: Fadlan fiiro gaar ah: iibka Our sheegi doonaa qiimaha caadadii sida macaamiisha sida caadiga ah u baahan. Import waajibaadka, cashuurta iyo kharashyada kuma jiraan qiimaha shayga ama maraakiibta. Kharashkaasi waxa uu mas'uul ka iibsada ". Fadlan ka hubi xafiiska caadooyinka dalka si loo ogaado waxa kuwanu kharash dheeraad ah uu noqon doono ka hor inta iibsashada. Haddii alaabta ayaa dib ugu noqdeen ama Halaagnay awoodin caadooyinka-ansixin, kharashka la xidhiidha la bixin doonaa by macaamiisha.
6. Sidee tayada aad?
Waxaan heysanaa koox QC xirfadeed, waxaan xakameeyo doonaa tayada alaabta lagu jiro oo dhan wax soo saarka mass, oo annaguna waannu samayn kartaa adeegga kormeerka kuu. Waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican si aan u caawiyo macaamiisha marka dhibaato ka dhacay.
7. aadan qorsheeyo karaa noo taraya?
Waxaan heysanaa koox xirfadeed naqshadeeye si ay uga caawiyaan macaamiisha shaqada design sameeyo.
Previous: Care Baby Play Mat (Large, Farm mashquul)
Next: xumbo derin xujo
Care Baby Play Mat
Game Play Mat Waayo, dadka waaweyn
Neoprene Large Mat Play
Play Mat Waayo, Ilmaha
Rubber Play Mat Waxyaabaha
Mat Play biyuhu
carruurtu ku ciyaarto derin derin xujo Eva
derin dabaqa xumbo
Eva dabaqa derin
derin dabaqa xujo
Wareeriya Jimicsiga Mat, cimlibaadhista xumbo waaxyihiisu Tile ...
Luoxi park warshadaha, Luozhuang, Linyi, Shandong, china
dermaha yoga Best ee dhammaan kuwii ku caashaqi jiray yoga